आज बैशाख २७ गते मंगलबार, हेर्नुहोस् राशिफल कस्तो छ त तपाईको आजको दिन ? « Sansar News
आज बैशाख २७ गते मंगलबार, हेर्नुहोस् राशिफल कस्तो छ त तपाईको आजको दिन ?
२७ बैशाख २०७९, मंगलवार ०७:१९
चोटपटकको योग रहेकाले होसियारीसाथ काम गर्नुहोला। फाइदाका पछि लाग्दा केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपरे पनि लागेको मूल्य उठाउन सकिनेछ। खर्चिलो काम गर्नुपर्ला। आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जामार्फत धन जुट्नेछ। आफ्नाबाट भने टाढिनुपर्ने हुन सक्छ। केही खर्च लागे पनि यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
आकस्मिक समस्याले शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ। चिताएको काम बिग्रनाले निराशा छाउनेछ। गोपनीयता बाहिरिनाले पनि समस्यामा परिनेछ। खर्च बढ्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा बाधा पुग्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। नतिजा सच्याउन काम दोहोर्याउनुपर्ला। पहिलेको उपलब्धि जोगाउने प्रयास गर्नुहोला।
२०७९ वैशाख २७ गते, मंगलवार, (१० मे २०२२)